Aluminiyamu chave chinhu chakanakisa kune vamwe vagadziri vemotokari. Motokari dzine aluminiyamu miviri inokwanisa kuvandudza hupfumi hwehuni, kukanganisa kupokana uye kubata. Vazhinji ma automaker kutenderera pasirese vanoona ramangwana realuminium miviri uye vanotenda kuti zvinhu izvi zvinosimudzira kuvandudza kwemotokari indasitiri.
Aluminium ndiro inoumbwa nenzira imwecheteyo simbi yemapuranga, ichidziisa tsvimbo kusvika ku58 degrees Celsius uye ichitenderedza nepakati pezvikamu zviviri zvekuzora kuti iipe chimiro. Kubva panguva ino zvichienda mberi, gadziriro idzi dzekutanga dzichaitwa munzira zhinji, kungave kubva pasi pegirazi kusvika pane inogona kana seyakagadzirwa kugadzira mota, mafambiro acho akafanana, musiyano chete ndiko kuchinja kwekuumbwa kwemakemikari. Iyo masimbi akareruka anoshandiswa muindasitiri yezvemotokari anogona kuve neanosvika gumi nemashanu aluminiyamu alloys uye anosimbiswa nemhangura uye silicon.
Aluminium haisi nyore kutambisa. Iyo alumina iri pamusoro pezvinhu inogona kunyudza gasi, nekudaro ichigadzira danga mune weld, nekuderedza simba weld. Panzvimbo iyoyo, mahwendefa ealuminium akashandisa yakakwirira-simba kusungwa uye inozvinyudza pachete rivets.
Nekuvandudza tekinoroji, ma automaker akatendeukira kunzira nyowani, akaunganidzira mitsara yemisangano, akatsiva nzvimbo yakataridzika neyerudzi rutsva rwe laser, uye akaisa mamirioni emadhora mukuvandudza kweiyo dhizaivha. Rivet chinhu chitsva uye chekare chinhu, kana keteni yakatemwa pamotokari, iyo yekushonga nzira yakatsauka kubva kuminda yakawanda yekunyorera pamutsetse wekereke.
Ivo vanoboora simbi pamusoro pasina kupisa, spark uye soot. Asi ivo vanozochengetedza zvakasimba zvikamu kuburikidza nekumonera nzvimbo, vatenge mitsva michina nemutengo wakaderera, uye vagadzirise tambo yesimbi yesimbi nemarobhoti anodhura ekuwachisa. Kuchova kune imwezve mukana wakakosha: iyo robhoti inogona kuona nyore nyore chokwadi cheiyo rivet chinzvimbo, icho chine maitiro akanaka kwazvo pamhando yebasa. Gadzirisa inomisa yezvinhu izvi nekuchera makomba mune akati wandei maaluminium uye kuigadzira pamwe chete mukuita. Chikara chinoburitsa kupisa mukati mekutenderera uye kana zvimedu zvemukati zvichipfuura, uye kudziya kuchaita kuti simbi iwedzere. Sezvo ichitonhora, gomba rinodzika, rinosimbisa mapundu, uye rinogadzira kubatana kwakasimba. Iyi tekinoroji yekushambadzira inonyanya kushandiswa nevekuEurope vatengesi. Zvakanakira zvadzo zvakachipa, zvakapusa, uye hazvidi kuti uise zvinodhura zvitsva zvinodhura.
Sezvo aluminiyamu isina magineti, makambani emotokari anofanirwa kutsiva michina yemusangano. Shandisa vacuum grip panzvimbo yemagineti grip kutakura zvikamu zvakagadzirwa nesimbi. Uye zvakare, izvo zvakanakira kugadzirwa kwemotokari aluminium zvakaonekwa, zvichideredza mhirizhonga mumisangano yemusangano nemidziyo. Kuenzaniswa neyetsika clumsy yekutarisa welder, zvishandiso zvekugadzira aluminium zvakapetana. Yakawanda nzvimbo, shoma ruzha. Zvinova nyore kuti mainjiniya vashande mufekitari pasi pemamiriro akadaro.
Nguva yekutumira: Jan-16-2020